Mbola tazonina hatrany ilay Emirati mpikatroka na dia efa roa taona aza izay no nahavitany ny saziny · Global Voices teny Malagasy
Tokony ho efa navoaka tamin'ny marsa 2017 ilay mpikatroka.
Voadika ny 26 Marsa 2019 5:29 GMT
Vakio amin'ny teny English, Français, Esperanto , عربي, Español, українська, русский, Italiano, Ελληνικά, Swahili, English
Mbola any am-pihazonana i Osama al-Najjar, na dia efa roa taona aza izay no nahavitany ny saziny. Sary: Kaonty Twitter an'ilay mpikatroka
Mbola hazonina tsy araka ny lalàna ilay mpikatroka Emirati Osama al-Najjar, na dia efa roa taona aza izay no nahavitany ny saziny higadra telo volana.
Nosamborina tamin'ny 17 marsa 2014 i Al-Najjar noho ny namoahana sioka miampanga fa nampijaliana ao am-ponja ny rainy, ary niantso ny hamotsorana azy sy ireo gadra noho ny fanehoan-kevitra ao amin'ny Emirà izy.
Ny rain'i Hussain Al-Najjar, dia ira amin'ireo Emirati mpikatroka miisa 94 notsaraina faobe tamin'ny taona 2013 noho ny fiantsoana fanitsiana ara-politika ao amin'ny Emirà amin'ny fiampangana mifandraika “Fanohintohinana ny fiarovam-panjakana”. Mamita ny famonjàna 11 taona izy amin'izao fotoana izao.
Nanome didy an'i Osama higadra telo taona araka ny lalànan'ny heloka an-tserasera miompana amin'ireo vesatra izay ahitana vesatra maro toy ny ‘fandrisihana fankahalàna’ ny fanjakana tamin'ny Novambra 2014 sy ny fanamboarana sy famelomana traonkala mpananihany sy ny fanimbana ny hevitra sy ny vaovao, ny Lapan'ny Fiarovam-Panjakana ao amin'ny Fitsarana Tampony, izay tsy misy intsony rafitra azo hanakarana fitsarana ambony kokoa intsony ny didy avoakany.
Tokon hoe navoaka izy tamin'ny 17 Marsa 2017, saingy noho ny fangatahan'ny fanoavana, dia nametraka azy ho “fandrahonana” ny fiarovam-pirenena ny fitsarana ary nanitatra ny famonjana azy tsy misy fampahafantarana mazava hoe firy taona. Roa taona aty aoriana, mbola ao am-ponja tsy fanta-pahitana veroka izay fotoana hamaranana ny fihazonana azy i Osama.
Tao amin'ny fanambaràna manamarika ny tsingerintaonan'ny andro nahavitan'ny fanasaziana azy ofisialy, nilaza izao teny izao ny Fanentanana Iraisampirenena ho an'ny Fahafahana ao EAM :
Koa satria tsy nisy fitsarana nahatonga izao endrika fihazonana izao, dia azo tazonina tsy manam-pahataperana ao anatin'ny fanasazian'ny governemanta – fa tsy fanasazian'ny rafi-pitsarana – ireo olona nafindra toerana ho amin'ny toerana tahaka ireny.
Na dia tsy voatsara ho nanao fampihorohoroana aza i Osama, dia hazonina ao amin'ny fonjaben'ny al-Razeen araka ny lalàna iadiana amin'ny fampihorohoroana. Milaza ny manampahefana Emirati fa ny tanjon'ireny toerana ireny dia ny haolorana tari-dalana ho an'ireo heverina ho “fandrahonana ny fanjakana”. Na izany aza, milaza ny vondrona mpandala ny zo fa mampiasa ny ady amin'ny fampihorohoroana ny manampahefana sy ireo lazaina ho foibem-panoloran-kevitra ho fialàna bala hamonjana tsy manampahataperana ireo gadra noho ny fisainana.